Bit By Bit - Sava lalana - 1.5 Toro-hevitra momba ity boky ity
Ity boky ity dia mandroso amin'ny alalan'ny drafitra fikarohana efatra: fitandremana ny fitondran-tena, fametrahana fanontaniana, fanandramana mihazakazaka ary fananganana fiaraha-miasa. Ny tsirairay amin'ireo fomba ireo dia mitaky fifandraisana hafa eo amin'ny mpikaroka sy ny mpandray anjara, ary ny tsirairay dia ahafahantsika mianatra zavatra samihafa. Izany hoe, raha mametraka fanontaniana amin'ny olona isika, dia afaka mianatra zavatra tsy azontsika ianarana amin'ny alalan'ny fitandremana ny fihetsika fotsiny. Toy izany koa, raha mandinika ny fanandramana isika, dia afaka mianatra zavatra izay tsy natao tamin'ny fitandremana ny fihetsika sy fametrahana fanontaniana fotsiny. Farany, raha miara-miasa amin'ny mpandray anjara isika dia afaka mianatra zavatra tsy haintsika ianarana amin'ny fandinihana azy ireo, mametraka fanontaniana amin'izy ireo, na mandefa azy ireo amin'ny fanandramana. Ireo fomba efatra ireo dia nampiasaina tamin'ny endrika sasany 50 taona lasa izay, ary matoky aho fa mbola hampiasaina amin'ny endrika 50 taona izy ireo hatramin'izao. Rehefa tapitra ny toko iray isaky ny fomba fiasa, anisan'izany ny olana ara-pihetseham-po atolotr'io fomba fiasa io, dia hanokana toko iray feno momba ny etika aho. Araka izay voafaritra ao amin'ny Preface, dia hotazoniko ny lahatsoratra fototra ao amin'ny toko ho madio araka izay tratra, ary ny tsirairay amin'ireo toko dia hifarana amin'ny fizarana antsoina hoe "Inona no hamakiana manaraka" izay ahitana fampahalalana sy toro-hevitra manan-danja amin'ny antsipiriany amin'ny antsipiriany kokoa ara-nofo.
Rehefa mijery mialoha, ao amin'ny toko faha-2 ("Mijery fitondrantena") dia hamaritra ny zavatra sy ny fomba fijerin'ny mpikaroka amin'ny fandinihana ny fitondran-tenan'ny olona. Ny tena manokana, hifantoka amin'ny loharanom-baovao lehibe noforonin'ny orinasa sy ny governemanta aho. Raha miala amin'ny antsipiriany amin'ny loharanom-baovao iray manokana, dia hamaritra ny endri-tsoratra 10 iraisan'ny loharanom-baovao lehibe aho ary ny fomba ahafahan'ireo mpikaroka mpandray anjara hampiasa ireo loharanom-baovao ireo ho an'ny fikarohana. Avy eo, dia asehoko ny paikady fikarohana telo izay azo ampiasaina mba hianatra tsara avy amin'ny loharano lehibe.
Ao amin'ny toko faha-3 ("Mametraha fanontaniana") dia hanomboka amin'ny fampisehoana izay azon'ireo mpikaroka hianatra amin'ny fandrindrana mihoatra ny angon-drakitra lehibe. Amin'ny ankapobeny dia hasehoko ahy fa amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana amin'ny olona, ​​ireo mpikaroka dia afaka mianatra zavatra izay tsy azony hianarana mora foana amin'ny fitandremana ny fitondrantena. Mba handaminana ireo fahafaha-maoritra noforonin'ny taona dizitaly dia hamerina hijery ny rafitra fandrakofam-peo mahazatra fandinihana mahazatra aho. Avy eo, hasehoko ny fomba ahafahan'ny dizitaly dizitaly vaovao ahafahana mamaky sy manadihady. Farany, hamaritra tetikady roa aho mba hampitambatra ireo angona fanadihadiana sy loharanom-baovao lehibe.
Ao amin'ny toko faha-4 ("Fihazonana fanandramana"), dia hanomboka hanehoana ny zavatra azon'ny mpikaroka atao ny mianatra raha toa izy ireo ka mandroso tsy mijery ny fitondrantena ary mametraka fanontaniana momba ny fanadihadiana. Amin'ny ankapobeny dia asehoko ny fanandramana mifehy ny fanaraha-maso-izay ahafahan'ny mpikaroka manentana izao tontolo izao amin'ny fomba tena manokana-ahafahan'ny mpikaroka hianatra momba ny fifandraisana ara-sosialy. Ampitahao ireo karazana fanandramana izay azontsika atao amin'ny lasa sy ireo karazana azontsika atao amin'izao fotoana izao. Amin'io anton-javatra io dia hamaritra ny fifanakalozam-bola tafiditra ao amin'ny paikady fototra amin'ny fitantanana dingana dizitaly aho. Farany, hifarana amin'ny toro-hevitra manokana momba ny fomba ahafahanao manararaotra ny herin'ny fanandramana dizitaly, ary hamaritra ny andraikitra sasantsasany izay mitondra ity hery ity aho.
Ao amin'ny toko faha-5 ("Fananganana fiaraha-miasa betsaka") dia hasehoko ny fomba ahafahan'ny mpikaroka manangona fiaraha-miasa betsaka - toy ny famatsiam-bola sy ny siansa olom-pirenena - mba hanaovana fikarohana ara-tsosialy. Amin'ny famaritana ireo tetikasam-piarahamiasa miara-miasa amin'ny fiaraha-miasa ary amin'ny fametrahana fitsipika fototra mahomby, dia manantena ny handresy lahatra anao amin'ny zavatra roa aho: voalohany, ny fiaraha-miasa amin'ny ankapobeny dia azo ampiasaina amin'ny fikarohana ara-tsosialy, ary faharoa, ireo mpikaroka izay mampiasa ny fiaraha-miasa goavana dia ho afaka hamaha olana izay toa tsy ho vita mihitsy teo aloha.
Ao amin'ny toko faha-6 ("Ethics"), dia hanamafy aho fa ny mpikaroka dia mihamitombo haingana ny herin'ny mpandray anjara ary ny fiovaovan'ny toetr'andro dia manova haingana kokoa noho ny fitsipika sy lalàna ary lalàna. Io fitambaran-kery lehibe mitombo io sy ny tsy fahampian'ny fifanarahana mikasika ny fomba tokony hampiasana ny herin'ny taratasy ho an'ireo mpikaroka mahomby amin'ny toe-javatra sarotra. Ho fanamafisana ity olana ity, dia hanamafy aho fa ny mpikaroka dia tokony hanaraka fomba fitsaboana mifototra amin'ny fitsipika . Izany hoe, ny mpikaroka dia tokony handinika ny fikarohana ataony amin'ny alalan'ireo fitsipika efa misy-izay horaisiko araka ny nomena-ary amin'ny alalan'ireo fitsipika etika ankapobeny. Hodinihiko ireo fitsipika fototra efa napetraka sy ireo rafitra ety ankapobeny izay afaka manampy amin'ny fitarihana ireo fanapahan-kevitry ny mpikaroka. Farany, hanazava ireo fanamby ara-pitsipi-pitondran-tena manokana izay andrasako ireo mpikaroka fa hiatrika ny hoavy, ary hanolotra torohevitra mahasoa ho an'ny sehatry ny etika tsy misy saina aho.
Farany, ao amin'ny toko faha-7 ("Ny ho avy"), hamerina hijery ireo lohahevitra izay mihazakazaka amin'ilay boky aho ary ampiasao izy ireo mba handinihana momba ireo lohahevitra izay ho manan-danja amin'ny ho avy.
Ny fikarohana ara-tsosialy amin'ny vanim-potoana nomerika dia hampiaraka ny zavatra nataontsika tamin'ny lasa sy ireo fahaiza-manao samihafa amin'ny ho avy. Araka izany, ny fikarohana ara-tsosialy dia ho an'ny mpahay siansa sosialy sy ireo mpahay siansa momba ny angona. Ny vondrona tsirairay dia manana zavatra ilaina, ary ny tsirairay dia manana zavatra ianarana.